Iyo AirPower inogona kusvika inotevera Kurume 27 | Ndinobva mac
Iyo AirPower inogona kusvika inotevera Kurume 27
Mazhinji ndiwo makuhwa akanongedzera pakupera kwaKurume isu taizove pakati pedu itsva Apple isina waya yekuchaja base, iyo AirPower. Nenheyo iyi yekuchaja taigona recharge kusvika kumatatu matatu panguva imwe chete uye inoshandiswa kune iyo iPhone, iyo AirPods uye iyo Apple Watch.
Iyo smart smart kuchaja iyo Apple yakaunza munaGunyana asi iyo isu hatina pakati pedu kusvika nhasi. Chinangwa cheichi chigadziko chekuchaja ndechekuti mushandisi ane iPhone ine induction kuchaja, Apple Watch uye AirPods, usapenga kuti uchadzoreredza nemachaja matatu.
Kugamuchira nhau nhasi kuti Apple iri kuronga chiitiko cheKurume 27Tine chokwadi chekuti zuva rimwe chetero tichava nenhau maererano nechaji iyi yekuchaja. Tingave takatarisana nemukana wekuti Apple inogovera chiitiko ichi chete kune nyika yedzidzo neIpad, MacBook uye Apple Penzura kana kuti panguva imwechete inoita chinyararire kugadzirisa webhusaiti yayo uye isu tine zvese AirPower uye kesi iripo yekumutsiridza iyo AirPods neyakaiswa.
Ndataura nezvenyaya iyi kakawanda uye ndizvozvo Apple iri kutamba zvinovhiringidza ichiratidza zvigadzirwa zvisina kuiswa pakutengesa panguva imwe chete zvichinonotsa zvakafanana kumisi isina kuiswa pachena. Ndosaka tichitenda kuti sei Keynote ari ichave yekupedzisira pamberi peWWDC 2018Ichave pano apo avo vanobva kuCupertino vachatora mukana wekudonhedza zvigadzirwa zvitsva pawebhusaiti yavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo AirPower inogona kusvika inotevera Kurume 27
Apple inoburitsa yechitanhatu beta yewatchOS 4.3 yevagadziri
MacBook, iPad uye Apple Penzura Yakakwira paRumor Chinyorwa cheKurume Keynote